Morontsiraka Pandawa eo Bukit. Bali " Journey-Assist
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Morontsiraka Pandawa eo Bukit. Bali
Famerenana ny morontsirak'i Pandava ao Bukit. Bali
Pandawa no morontsiraka atsimo atsimo any Bali, izay hita any amin'ny faritra atsimon'ny Saikinosy Bukit. Rakotra fasika beige kely malefaka izy io. Ny morontsiraka dia azo antsoina hoe somary lehibe (sakan'ny - 30 ka hatramin'ny 50 m, ny halavany - mihoatra ny 1 km). Malemy ny fidinana ao anaty rano, tsy misy famoifoizana maranitra. Ny rano eto dia manana loko tena tsara. Betsaka ny haran-dranomasina sy trondro manintona eo amin'ny fanambanin'ny ranomasina. Hafa ity morontsiraka ity satria misy ny fepetra amin'ny kayak.
Amin'ny ankapobeny, ny morontsiraka dia mamela fahatsapana tena tsara, raha ampitahaina amin'ny morontsiraka maro amin'ny nosy.
Misy onja avo any Pandava.
Fotodrafitrasa sy endrika mampiavaka ny morontsiraka
Mizara roa ny Pandava: atsinanana sy andrefana. Ny ilany andrefana dia toa fasiky fasika, ny halavany dia tokony ho 2 m. Saika ny fotodrafitrasa rehetra amin'ny morontsirak'i Pandava dia mifantoka eto. Eo amoron'ny morontsiraka dia misy elo sy seunger an'ny masoandro milahatra, ary misy kayak eo akaikin'ny rano. Ao amin'ny halalin'ny morontsiraka, ao ambadiky ny fitsanganan'ny masoandro, dia misy toeram-pitaizana sakafo maro. Ny mpamonjy voina koa dia miasa eto. Misy fijanonana malalaka eo ambadiky ny trano fisakafoanana. Ny faritra amin'ny ilany andrefana amin'ny Pandava dia sahabo ho 800 sq. M.
Morontsiraka Pandava. Parking
Ny atsinanana amin'ny andrefana dia mazava tsara fa misy fefy vato goavambe. Eto ianao dia afaka mahita gazebo manirery (mety amin'ny fakana sary). Ankoatr'izay, tery ny morontsiraka, miampita amin'ny fefiloha. Raha mila midina amin'ny rano ianao dia mila mitsambikina amin'ny vato. Tsy mahafinaritra sy mampidi-doza izany. Noho izany, tsara kokoa ny mandeha eny amin'ny lampivato fotsiny. Ireo mpizaha tany any amin'ny faritra atsinanan'ny Pandava dia tsy misy mihitsy, toy izany koa ireo fotodrafitrasa. Misy lalana tery ihany izay ahafahanao mifanena amin'ny mponina eo an-toerana matetika. Tonga mankafy ny ranomasina izy ireo.
Aorian'ny 200 m hafa, afaka mandeha amoron-dranomasina kely sivily ianao amin'ny farany. Tsy manam-paharoa amin'ny faritra andrefan'ny Pandava izy io, saingy mahazo aina izy ary vitsy ny olona ao aminy.
Zavatra tokony hatao ao amin'ny Beach Pandawa
Fitsidihana trano fisakafoanana sy kafe.
Dance of Kechuak.
Fidirana amoron-dranomasina - maimaim-poana
Fijanonana bisikileta - 2 000 ropia
Fijanonan'ny fiara - 5 000 ropia
Fanofana elo sy lounger an'ny masoandro - vola 25
Ny Pandawa Beach no morontsiraka atsimo atsimo any Bali. Any atsimon'ny Saikinosin'i Bukit no misy azy.
adiresy: Pandawa Beach, làlana mankamin'ny tranonkala fanombohana Bukit Timbis 80361, Kutuh, Bali, Indonesia
mandrindra: -8.845805, 115.185088
Tendrombohitra Pandava amin'ny sarintanin'i Bukit. Bali
Tora-pasika Pandawa amin'ny sarintanin'i Bukit sy Bali
Azonao atao ny mahita an'ity torapasika ity amin'ny sari-tany ary manamboatra làlana mankeny aminy amin'ny alàlan'ny sari-tanànan'i Bali misy eo amin'ny faran'ny pejy.
Amoron-dranomasina Pandawa amin'ny sarintany satelita misy an'i Bukit sy Bali
Sarin'ny morontsirak'i Pandava
Morontsiraka Pandava eo Bukit
Fotodrafitrasa amoron-dranomasina Pandava
Parasailing any Pandava
Tranon-tsambo eny amoron-dranomasina
Faritra fidirana mankany amin'ny morontsirak'i Pandava
Toerana malaza ho an'ny sary tsimoka
Tora-pasika Bali tsy fahita firy izay harahi-maso ny fiarovana ny morontsiraka
Fahagagana 7 tany Gresy fahiny
rem / fanehoan-kevitra amin'ny Fahagagana 7 an'ny Gresy fahiny tsy misy
Faritra tsara tarehy 7 any Torkia
rem / fanehoan-kevitra amin'ny faritra mahafinaritra 7 any Torkia tsy misy
Tora-pasika 10 tsara indrindra any Torkia
rem / fanehoan-kevitra amin'ireo morontsiraka 10 tsara indrindra any Torkia tsy misy
Toro-marika 10 malaza indrindra any Polonina
Angel / fanehoan-kevitra amin'ireo toerana manintona 10 malaza indrindra any Polonina tsy misy
Toerana fialan-tsasatra tsy dia misy dikany loatra any Gresy
rem / fanehoan-kevitra amin'ny toerana fialan-tsasatra tsy dia misy dikany loatra any Gresy tsy misy
Kirillovka. Mijanona eo amin'ny Ranomasin'i Azov. Ukraine
Angel / fanehoan-kevitra amin'ny Kirillovka. Mijanona eo amin'ny Ranomasin'i Azov. Ukraine tsy misy
Nosy 10 lehibe indrindra any Gresy
rem / fanehoan-kevitra amin'ireo nosy 10 lehibe indrindra any Gresy tsy misy
Nosy avaratra atsinanana atsinanana mahafinaritra an'ny Ranomasina Aegean. Gresy
rem / fanehoan-kevitra fandraketana nosy 7 mahafinaritra avaratra atsinanan'ny Ranomasina Aegean. Gresy tsy misy
Ireo nosy tsara tarehy 4 any Sporades. Gresy
rem / fanehoan-kevitra handraisana amina nosy sporades 4 tsara indrindra. Gresy tsy misy
Faritra tsara tarehy 13 any Gresy
rem / fanehoan-kevitra amin'ireo faritra 13 tsara indrindra any Gresy tsy misy